हाइ प्रोफाइल बलात्कार काण्ड : महरा पदविहिन हुने तर जेल नजाने रणनीति नै हो त ? – Durbin Nepal News
बिष्णुहरि घिमिरे, दूरबिन-नेपाल	१५ आश्विन २०७६, बुधबार १३:२५
बिष्णुहरि घिमिरे, दूरबिन-नेपाल
अमेरिका, अक्टोबर २ । नेपालीहरुको सबै भन्दा ठूलो चाड दशैंलाई नै ओझेलमा पार्ने गरि नेपालमा हाइ प्रोफाइल बलात्कार काण्ड सार्वजनीक भयो । संघीय संसद सचिवालयमा काजमा कार्यरत एक महिलाले प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफुलाई आफ्नै निवासमा आएर मदिराको नशामा बलात्कार र कुटपिट गरेको गम्भिर आरोप लगाइन ।
उनले घटना लगत्तै प्रहरीमा टेलिफोन मार्फत उजुरी गरेको र प्रहरी पनि त्यसै रात घटना स्थलमा नै पुगेको प्रमाणित भइ सकेको छ । शुरुमा ती महिलाको आरोप ठाडै अस्वीकार गरेका महराले अन्तत सभामुख पदबाट राजिनामा दिएका छन् । भलै उनको पार्टी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सभामुख र सांसद दुबै पदबाट राजिनामा दिन निर्देशन दिएको भनिए पनि महराले सभामुखबाट त्यो पनि सर्त सहित राजिनामा दिए ।
२४ घण्टाको बीचमा सार्वजनीक भएका ती महिलाका दुई वटा भिडियोवार्ता, त्यस पछि उनको फेसबुकमा पोष्ट भएका स्टाटस, महराका दुई छोराहरुले युद्दकालिन हतियार सहितको फोटो राखेर पोष्ट गरेका स्टाटसले धेरै शंका उब्जाएको छ ।
महराको राजिनामा पछि उनीमाथि कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया शुरु हुने अड्कल काटिदै गर्दा घटनाले नयाँ मोड लियो । पीडित भनिएकी महिलाले २४ घण्टा भित्रै बयान फेर्दै अघिल्लो दिन हाम्राकुरा डटकमका सम्पादक अजयबाबु सिवाकोटीलाई दिइएको भिडियो अन्तरवार्ता नै झुटो भएको बताइन । नेपालीमा एउटा उखान नै छ, “रात रहे अग्राख पलाउछ” ।
२४ घण्टाको बीचमा सार्वजनीक भएका ती महिलाका दुई वटा भिडियोवार्ता, त्यस पछि उनको फेसबुकमा पोष्ट भएका स्टाटस, महराका दुई छोराहरुले युद्दकालिन हतियार सहितको फोटो राखेर पोष्ट गरेका स्टाटसले धेरै शंका उब्जाएको छ । पछिल्लो भिडियो हेर्दा ती महिला कति दवावमा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्चार माध्यमका लागि समेत हट केक बनेको यो घटना लहरो तान्दा पहरो थर्काउने देखिए पछि घटनामा ‘नाटकीय’ परिवर्तन आएको देखिन्छ । निवर्तमान सभामुख महराको बदमासी प्रचलित कानुन अनुसार जेल जीवन विताउनु पर्ने नै देखिन्छ । तर महरा जेल जादाँ उनी मात्र होइन मुलुकका अन्य ठूला नेताको भविष्यमा नै तरवार झुण्डिने प्रष्ट छ ।
पूर्व माओवादी पार्टीमा महरा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिका सबै भन्दा शक्तिशाली नेता हुन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए देखि महरा सबै भन्दा धैरै समय शक्तिशाली पदमा छन् । त्यसो त महरा विवादमा मुछिएको यो पहिलो पटक होइन । चुनावको समय चीनियाँ सँग करोडौ रकम मागेको, तत्कालिन माओवादी लडाकुको तलव भत्ता ब्यक्तिगत खातामा राखेको, सन्चारमन्त्री हुदाँ कौडीको भाउमा फ्रिक्वन्सी बेचेको लगायतका आर्थीक अपचलका दर्जनौ आरोप उनी माथि लाग्दै आएको हो । यस अघिका हरेक काण्ड पछि महरा झनै शक्तिशाली हुदै गएका थिए ।
नेकपामा अब दोस्रो पिडिले नेतृत्वका लागि दावी गर्दा पूर्व एमालेबाट नेम्बाङ र पूर्व माओवादीबाट महरा बीचमा नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । नेम्बाङ, ओलीका विश्वास पात्र हुन् । महरा, प्रचण्डका दाहिने हात । महरा कमजोर बन्नु भनेको नेम्बाङका लागि भोलीको राजनीतिमा पार्टीको नेतृत्वका लागि बाटो खाली हुनु पनि हो ।
समाचारहरुमा जनाईए अनुसार घटना सार्वजनीक भए पछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आ-आफ्नो च्यानलबाट महरा माथिको आरोपबारे जानकारी लिएका थिए । यस्तै संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा संसदिय दलका उप नेता सुभाष नेम्बाङ पनि महराका कारण सिङ्गो पार्टीलाई बदनाम गराउन नहुने पक्षमा देखिए । यसै पनि यस अधिका थुप्रै काण्डमा सरकार र नेकपाको छवी धुमिल भएका कारण अब ठूलो क्षति बोक्न नहुने पक्षमा उनी थिए ।
त्यसो त नेम्बाङको अर्को स्वार्थ पनि हुन सक्छ । नेकपामा अब दोस्रो पीडिले नेतृत्वका लागि दावी गर्दा पूर्व एमालेबाट नेम्बाङ र पूर्व माओवादीबाट महरा बीचमा नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । नेम्बाङ, ओलीका विश्वास पात्र हुन् । महरा, प्रचण्डका दाहिने हात । महरा कमजोर बन्नु भनेको नेम्बाङका लागि भोलीको राजनीतिमा पार्टीको नेतृत्वका लागि बाटो खाली हुनु पनि हो ।
महराले “म त सकिए सकिए तिमिहरुलाई किन छोड्ने” भन्ने रणनीति लिए भने दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकिकरण र दुई तीहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको जग नै हल्लिन सक्छ ।
तीनै जनाले आ-आफ्नो संयन्त्र मार्फत ती महिलाले भनिए अनुसार महरा उनको डेरामा गएको र घटनामा संलग्न भएको पुष्टी गर्ने आधार भेटे पछि, “लौरो पनि नभाचिने सर्प पनि मर्ने” रणनितिमा लागेको देखिन्छ । त्यसै रणनीति अनुसार महराले पदबाट राजिनामा दिने र महिलाले बयान फेर्ने घटना विकास भएको त होइन ?
महरा पदमा रहदाँ पनि र आरोप प्रमाणित भएर महरा जेल जाँदा पनि सरकार र नेकपा अप्ठेरोमा नै पर्ने सम्भावना थियो । महरा माथि यस अघि लागेका काण्डहरुमा उनी एक्लैको मात्र भूमिका स्वीकार गर्न सकिदैन । महरा जेल यात्रा तर्फ जाँदै गर्दा त्यसको असर पूर्व माओवादी पार्टी, त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड हुदै सरकारलाई नै पर्न सक्छ । महराले “म त सकिए सकिए तिमिहरुलाई किन छोड्ने” भन्ने रणनीति लिए भने दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकिकरण र दुई तीहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको जग नै हल्लिन सक्छ । त्यसै कारण महरालाई पद मुक्त गराएर जनगाल टार्ने, महिलालाई बयान फेर्न लगाएर उनको जेलयात्रा टार्ने रणनीति बुनिएको त होइन भनेर शंका गर्ने ठाँउ पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ ।
पीडित महिला र घटना स्थलको सुरक्षा दिदै थप प्रमाण खोज्नु पर्ने प्रहरीले हाइ प्रोफाइल बलात्कारको घटनालाई सामान्य रुपमा दिदै कार्यलयमा उजुरी दिनु आउ भन्नु जस्तो गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ के हुन्छ ?
यदी त्यसो होइन भने ती महिलाले “बयान” फेरेको भरमा नै यो घटना सामसुम पारिनु हुदैन । त्यसो त प्रहरीले पीडित भनिएकी महिलाले जाहेर दिन र स्वास्थ परिक्षण गर्न अस्वीकार गरेको समाचार आएका छन् । त्यो स्वाभाविक पनि छ । सर्वेन्द्र खनाल प्रमुख भएर आए त्यस पछि नेपाल प्रहरी २०४६ साल यताकै निरिह देखिएको छ । कन्चनपुरमा बालिका बलात्कार पछिको हत्यामा साख गुमाएको नेपाल प्रहरी त्यस पछिका दर्जनौं घटनामा चुकेको देखिन्छ ।
यसै घटनामा पनि पीडित महिलाले लगतै प्रहरीलाई खवर गरेको र प्रहरीले उनको कोठामा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै केही तस्वीर र भिडियो पनि लिइएको भनिएको छ । प्रहरीको सबै भन्दा ठूलो नालायकी त्यही देखिएको छ । उसले त्यो घटनालाई सामान्यरुपमा लिदै पीडित महिलालाई कार्यलयमा उजुरी दिन आउन भनिएको छ । पीडित महिला र घटना स्थलको सुरक्षा दिदै थप प्रमाण खोज्नु पर्ने प्रहरीले हाइ प्रोफाइल बलात्कारको घटनालाई सामान्य रुपमा दिदै कार्यलयमा उजुरी दिनु आउ भन्नु जस्तो गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ के हुन्छ ?
महिलाले टेलिफोन मार्फत नै उजुरी दिइ सकेकी छिन । प्रहरी जिम्मेवार हुनै सकेन । प्रहरी पछि पूर्व माओवादीका महिला नेता, आफन्त गुहारेकी ती महिला अन्यठाँउबाट साथ नपाए पछि मात्र मिडियामा गएको देखिन्छ । पीडित महिलाका श्रीमान् पनि काठमाडौं उपत्यका बाहिर गएको र तीन दिन पछि मात्र आएको भनिएको छ । कम्तिमा उनका श्रीमान् यसै रात काठमाडौं फर्किएर उनलाई आडभरोसा दिनु पर्ने थियो ।
प्रहरी, नेता, श्रीमान् र अन्य आफन्तबाट समेत साथ नपाएकी ती महिलालाई समाचार सार्वजनीक भए पछि, “मन मिले मेला नत्र झमेला” भन्दै खसाल्न महिलाहरु समेत अग्र मोर्चामा देखिए । आफ्नै श्रीमानले पनि स्वीकृति बिना यौन सम्पर्क गरे बलाल्कार ठहरिने कानुन नेपालमा नै छ । त्यो कुरा महिलावादीले नै विर्सिए । हिजो के भयो त्यो मुख्य प्रश्न होइन । श्रीमान् नभएको थाहाँ पाउदा पाउदै मदिरा बोकेर एक्ली महिला भएको कोठामा रातको समयमा जानु पर्ने कारण त्यो पनि सभामुख जस्तो व्यक्तिका लागि के थियो ? के त्यो उचित थियो ?
बलात्कारमा परेकी महिला सकभर किन सार्वजनीक हुन चाहादैन भन्ने यो एउटा उदाहरण बनेको छ । इच्छा विपरित आफ्नो अस्थित्व सुम्पनुको एउटा पिडा त छदै छ, त्यस पछि प्रहरी,कानुनी झमेला, समाजले हेर्ने दृष्टिकोणले तीनै महिला दोस्रो पटक बलात्कृत हुन्छन । सबै तीरबाट असयोग पाएकी ती महिलाले अब बयान फेर्नुको उपाय के हुन सक्ला ।
पछिल्लो भिडियोमा ती महिलाले आफु डिप्रेसनको विरामी भएको र आवेसमा आएर सभामुख माथि झुट्टा आरोप लगाएको बताएकी छिन् । उनको दोस्रो भिडियो अन्तरवार्तालाई नै सही मानौ । उनको त्यो कुरा सत्य हो भने पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नु पर्दैन ? के कुनै महिलाले रिसको झोकका कसैको चरित्र हत्या गर्न मिल्छ ? यसले समाजमा कस्तो नजिर बस्छ ? ती महिलाले दुई वटा भिडियो वार्ता मध्ये एउटामा झुट बोलेकी छन् । के त्यसको छानवीन गर्नु पर्दैन ।
यस्तै प्रश्नै प्रश्नले महरा पदविहिन हुने तर जेल नजाने रणनीति अन्तर्गत त नै महिलाको बयान फेरिको हो भन्ने आधारलाई बल दिएको छ ।
१५ आश्विन २०७६, बुधबार १३:२५ मा प्रकाशित